Nomena tombony ireo koperativa miompy tantely tahaka ny koperativa Soatantely - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Fankalazana ny 8 Martsa andron’ny vehivavy
Nomena tombony ireo koperativa miompy tantely tahaka ny koperativa Soatantely
Nitsidika ny Faritra Matsiatra Ambony ny vadin’ny Filoham-pirenena Rtoa Mialy Rajoelina ny 2 Martsa 2021. Fitsidihana tafiditra ao anatin’ny herinandro anomezana sehatra manokana ny vehivavy. Nahazo tombony tamin’izany ny Kaominina Sahambavy ao amin’ny Distrika Lalangina.
Nitsidika ny Faritra Matsiatra Ambony ny vadin’ny Filoham-pirenena Rtoa Mialy Rajoelina ny 2 Martsa 2021. Faritra manana tany lonaka i Matsiatra Ambony ary mbola malalaka ny velaran-tany afaka ambolena karazan-kazo fihinam-boa. Nosafidiana ny hazo fihinam-boa noho izy ireo ilain’ny tantely. Fantatra fa an’isany mampitombo ny vokatra tantely ny fahabetsahan’ny felana rehefa amin’ny fotoana mampisy ny voany. Noho izany tsy vitsy ny koperativa eto amin’ny Faritra no misafidy ny seha-pihariana tantely. Fikambanam-behivavy tantsaha iray miorina ao amin’ny Kaominina ambanivohitra Sahambavy Distrikan’ny Lalangina ny fikambanana Soatantely izay efa ela niompiana tantely. Faniriany ny hampitombo ny vokatra satria tsy mena mitaha amin’ny an’ny hafa ny fahatsaran’ny kalitao hatramin’izay. Nanome tohana ara-pitaovana ny koperativa Rtoa Mialy Rajoelina vadin’ny filoham-pirenena tamin’ny fitsidihany teto Fianarantsoa ka nanolotra izany tany an-toerana tao amin’ny Kaominina Sahambavy ary nataony tamin’ny anaran’ny fikambanana Fitia tarihiny. Nandeha fiaran-dalamby ny tenany raha nihazo an’i Sahambavy notronin’ny Delegasiona niaraka taminy nahitana ny Minisitry ny fanabeazam-pirenena Rtoa Sahondrarimalala Marie Michelle. Tsy vitan’izany fa hampiofanina izy ireo hampitombo bebe kokoa ny tantely vokariny. Nambarany nandritra izany fa mendrika ampiana ny vondrona miasa. Tohoka fiompiana tantely miisa 40 sy kojakoja ilaina miaraka amin’io ary 200 zana-kazo fihinam-boa sy zava-maniry fanao dite izay isan’ny mampalaza an’i Sahambavy. 600 kosa ny tontaliny nomeny ny kaominina. Niara-namboly hazo ihany koa tamin’ny vondron’ny vehivavy teo amin’ny tany manakaiky ny biraon’ny Kaominina Rtoa Mialy Rajoelina tamin’ny fitsidihany tao Sahambavy.
Distrika 6 ato amin’ny faritra Matsiatra Ambony no misy ny Zotram-pihariana Tantely. Distrika Lalangina, Vohibato, Isandra, Ambohimahasoa, Ikalamavony ary Ambalavao. Koperativa samihafa manodidina ny 250 eo kosa no misy.
Lohahevitra manentana amin’izao fankalazana ny andron’ny vehivavy 8 martsa 2021 izao ny hoe : “Vehivavy mizaka tena sy miarin-doha ao anatin’ny Tontolo iainana mirindra ho amin’ny Fampandrosoana Lovain-jafy”